Eedaysane ka haray kiiskii Caaisho Ilyaas oo la sii daayey - Bandhiga Media
Feb20 February 20, 2020
Eedaysane ka haray kiiskii Caaisho Ilyaas oo la sii daayey
C/Salaan C/Raxmaan Warsame oo ka mid ahaa saddex Nin oo loo heystay dilka iyo kufsiga Caa’issha Ilyaas Aadan ayaa la sii daayay kaddib markii ay sidaas ku heshiiyeen labada reer.
Qoyska C/Salaan ayaa bixiyay Magta Caa’isha oo lagu qiimeeyay 75 Neef oo Geel ah,waxaana hashiiba lagu qiimeeyay $500 oo doollar, iyada oo goobta lagu bixiyay $25,000 oo doollar una dhiganta 50 Neef oo Geel ah.
Sidoo kale labada Qoys ayaa isku afgartay in muddo saddex bilood gudahood ah lagu bixiyo 25 Neef oo geel ah lacagtoodana ay noqoneyso 12,500 oo doollarka Mareykanka.
Heshiis ay kala saxiixdeen labada dhinac ayaa loo geeyay hay’adaha garsoorka Puntland waxaana hay’aduhu amreen in la sii daayo C/Salaan C/Raxmaan Warsame.
11kii Bishan ayey Maxkamadaha Puntland fuliyeen qisaasta laba ka mid ah Ragga dilay Caasha oo uu midkood la dhashay C/Salaan C/Raxmaan Warsame.
Hay’adaha garsoorka ayaa xilligaas sheegay in kiiska C/Salaan dib loo dhigay muddo 10 Maalmood ah iyada oo ay berri ku beegneyd fulinta xukunkii ku dhacay ee dilka ahaa.
MW Dani oo Jabuuti kula kulmay MW Geelle
Somali Ku dagaalantay Jaziiradda Malta